Madaxweyne Xasan oo xalay casho sharaf u sameeyey madaxweyne Ismaciil Cumar Geelle – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo xalay casho sharaf u sameeyey madaxweyne Ismaciil Cumar Geelle
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay casho sharaf u sameeyey madaxweynaha Jabhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle oo shalay booqasho ku yimid caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Casho sharafta ayaa waxaa ka qeyb galaya xubno ka tirsan labada gole ee dowlaada Soomaaliya, ururada bulshada rayidka ah, iyo marti kale.
Kulanka casha sharafta ayaa la filayaa in khudbado ay ka jeediyaan mas’uuliyiinta ka qeyb galaya oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti.
Intii munaasabaddu socotay, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa biladda ugu sareysa dalka ee geesinomo guddoonsiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti, Ismaaciil Cumar Geelle oo booqasho ku jooga magaalada Muqdisho.